I-Private Malmok Beach Studio 2 enomnyango wayo wokungena
Endaweni efanayo ne-Studio 1 Malmok Beach Aruba. Ingadi yangasese futhi ebiyelwe ene-gas BBQ kanye nokungena eyakho. I-WiFi yamahhala, isiqandisi, i-microwave nesikhi sekhofi. Itholakala endaweni ehlonishwayo. Kuphephile & 5 amaminithi ukuhamba kusukela emabhishi amahle kakhulu lapho ungakwazi ukubhukuda, snorkel noma ujabulele ukushona kwelanga. Igiya le-snorkeling, izihlalo zasolwandle, ijeke yeqhwa namabhayisikili kukhululekile ukuhlola inkululeko emabhishi. Eduze kwamahhotela anezinketho eziningi zebha yokudla. Zizwe ukhululekile ukufunda izibuyekezo studio 1. Wamukelekile kakhulu!
I-Studio Malmok, ene-aircondition, inomnyango wayo wokungena onengadi ethokomele lapho ungahlala khona uzipholele noma i-BBQ. Itholakala endaweni enhle ngaphesheya kwe-Tierra Del Golf Course (i-landscaping ehlaba umxhwele). Indlu ekhanyayo nezindunduma ziseduze ekhoneni. Amabhishi ahlukile futhi indawo ye-snorkel-hot-spot yase-Aruba, ngakho-ke lapho wonke ama-catamaran enza ima kanye nehange, kuyimizuzu emi-5 nje. hamba.
Umakhelwane ungenye yezindawo zase-Aruba ezihlonishwayo, ezinhle futhi eziphephe kakhulu. Ukuhamba nje okuyimizuzu emi-3 ukusuka endaweni eyi-High-Rise, nokuhamba imizuzu emi-5 ukuya nokusuka kwelinye lamabhishi anesihlabathi esimhlophe nolwandle oluluhlaza.
Ukhona njalo ukuphendula imibuzo yakho